Kwadoro: Ngwọta Mgbasa Mmemme Enterprise | Martech Zone
Monday, October 7, 2013 Douglas Karr
Nso nso a ka IBM zutara, Kwado bụ nwa afọ push ngosi ikpo okwu maka iOS, A gam akporo, Windows na Mobile Web.
Kwado na-enyere ndị ahịa aka ịnapụta ọkwa dị mkpa ma rụọ ọrụ na ọdịnaya iji mee ka itinye aka na ntinye ego, na-edebe akara gị. Enwere ike izipu ọdịnaya ike dabere na ngalaba ndị ahịa, ọnọdụ, na akparamagwa. Niile atụmatụ dị site marketer-enyi na enyi dashboard ma ọ bụ API maka izipu usoro.
Onyinye si Kwado -agụnye:
Nkwupụta Native na Weebụ - jikota amamọkwa ezubere iche na weebụsaịtị gị niile yana ụmụ amaala iOS, Android, BlackBerry na Windows.
Omume na Ọnọdụ na-akpali - Jiri omume mkpanaka onye ahịa ọ bụla na ọnọdụ anụ ahụ, ma kpuchie ngalaba ndị ahịa iji chụpụ omume bara uru ịchọrọ.
Push, SMS na Passbook - Tinye ndị ahịa mkpanaka gị na ọwa nke kwesịrị ha. Ntinye aka na ntinye aka, itinye n'ọrụ yana monetization yana ngwa ahịa na-ere ahịa.
Ezigbo oge - Nweta mkpọsa, ngwa yana ọkwa onye ọrụ nchịkọta. Ghọta otu ozi gị si eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe gị na omume ndị ịchọrọ.
Ndị na-etinye aka na ụlọ ọrụ gụnyere mkpọsa na izi ozi na-akparaghị ókè, ngalaba ndị ahịa na-akparaghị ókè, Geo-Targeting na-enweghị njedebe na ezigbo oge Geo-ịkpalite, mmejuputa QA, ọzụzụ, nkwado mkpọsa na ụmụ amaala (iOS, Android, BlackBerry, Windows) na Web (Mobile, Table, Desktop) ) Amamọkwa, SMS na Passbook.